राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सक्रिय बन्दै सरकार | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सक्रिय बन्दै सरकार
६८ व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा, रू. ५ अर्ब ११ करोड माग दाबी
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७४ फागुनदेखि यता राजस्व चुहावटबारे गरेको छानविनबाट बिगो र जरीवानाबापत ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ । उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएपछिको अनुसन्धानमा राजस्व चुहावटमा संलग्न ६८ जना व्यक्ति तथा संस्थाबाट सो बिगो जरीवाना र माग दाबी गरिएको हो ।
करीब ६ महीनाको अवधिमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ठूलो प्रगति भएको विभागको दाबी छ । सबैभन्दा बढी हिमालयन कार्गोका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्ता र मधुकुमारी गुप्ताबाट रू. २ अर्ब ७२ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । विभागले सो बिगो दाबी तथा जरीवानासँगै कर छलीको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ । अनुसन्धानबाट कर, शुल्क र ब्याजसहित रू. ५४ करोड ४२ लाख ४७ हजार ७ सय ५२ कर छली गरेको प्रमाणित भएको विभागको दाबी छ । बिगो र जरीवानाका साथै उनीहरूलाई ३ वर्ष कैद सजायको मागसहित शुक्रवार मुद्दा दर्ता गरिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।
विभागले गुप्तालाई आयकर छली र भन्सार शुल्क नै नतिरी सामान भित्र्याएको र भएका बिलबीजकसमेत नष्ट गरी प्रमाण लुकाएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताएको छ । व्यवसायको कारोबार लुकाई आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/६६ देखि २०७१/७२ सम्म साना करदाताका रूपमा आय घोषणा गरी गुप्ताले वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ मात्रै आयकर तिर्दै आएका विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार आव २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्म कुनै पनि कर नबुझाई बसेको देखिन्छ ।
भारतीय सनसाइन कम्पनीका मालिकसमेत रहेका गुप्ताले नेपाली केटीसँग विवाह गरेर नेपालमा विभिन्न फर्ममार्फत अवैध कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको बताइएको छ । गत जेठ २७ गते नोभा ब्राण्डको घ्यू र पाउडर दूध लिएर काठमाडौं आएको ट्रक नियन्त्रणमा लिएर विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । सोही बेला पक्राउ परेका गुप्ता प्रहरी हिरासतमा छन् भने उनकी श्रीमती फरार रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
यसबाहेक दूध तथा घ्यूको नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाई चोरीपैठारी गरेकोमा रवीन्द्र गुप्तासमेत २२ जनालाई रू. १० करोड २० लाख बराबरको बिगो दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । यस्तै सुन चोरीपैठारी गरेको अभियोगमा ७ जनाविरुद्ध साउन २५ गते जिल्ला अदातलमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
राजस्व चुहावटमा संलग्न भन्सारका कर्मचारीलाई समेत विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । ‘हामीले पहिलोपटक राजस्व प्रशासनका कर्मचारीप्रति कठोर भएर कदम चालेको छौं । सरकारको नीति तथा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार अब राजस्व छली प्रकरणमा संलग्न गर्ने कसैलाई छोडिन्न,’ महानिर्देशक मैनालीले भने ।
विभागले आगामी असारसम्ममा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सफ्टवेयर बनाउने तयारी गरिरहेको छ । उक्त सफ्टवेयरले भन्सार नाकामा आयात तथा निर्यातको तथ्याङ्क राख्ने भएकाले चुहावटमा नियन्त्रण हुने महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ । उनका अनुसार सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएपछि यसअघि इण्ट्री नगर्ने, बिल हराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनेछ र कर छली गर्ने गराउनेलाई कारबाही हुनेछ । यसले गर्दा सबै कारोबार सफ्टवेयरको प्रणालीमा आउने र राजस्व सङ्कलनको दायरा विस्तार हुने उनले बताए ।